ကြားခဲ့ဖူးတဲ့ ပုံပြင်လေးတစ်ပုဒ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ကြားခဲ့ဖူးတဲ့ ပုံပြင်လေးတစ်ပုဒ်
Posted by Ma Ma on Feb 2, 2011 in Creative Writing, Drama, Essays.., News | 17 comments
ပုံပြင် ရေးမိရေးရာ လက်စမ်းစာပေ
မြန်မာပြည်မှာနေတဲ့လူတွေတော့ ကြားဖူးကြလိမ့်မယ်ထင်တယ်။ မကြားဖူးတဲ့လူတွေသိရအောင် ပြောပြချင်ပါတယ်။
တစ်ခါတုန်းက ဒိသာပါမောက္ခကြီးဆီကို ပညာသင်ကြားဖို့ လူငယ်နှစ်ယောက် ရောက်လာကြတယ်တဲ့။ တစ်ယောက်သောလူငယ်က ဥာဏ်ပညာထက်မြက်ပြီး၊ နောက်တစ်ယောက်ကတော့ နုံချာတယ်တဲ့လေ။ ဥာဏ်ပညာထက်တဲ့ လူငယ်က ဆရာကြီးသင်ကြားပေးသမျှ ပညာတွေကို အကုန်လုံးလေ့လာပြီး တတ်မြောက်သွားသော်လည်း ဥာဏ်နုံတဲ့လူငယ်ကတော့ ဘာမှ မတတ်မြောက်ဘူးတဲ့။ ပညာသင်ကြားပြီးလို့ ကိုယ့်ရပ်ရွာပြန်တဲ့အခါ အသက်မွေးမှုပြုနိုင်အောင် ဆိုပြီးတော့ ဥာဏ်နုံတဲ့လူငယ်ကို ဆရာကြီးက အိုးဖုတ်နည်းတစ်ခုတော့ သင်ကြားပေးလိုက်တယ်တဲ့။
အဲဒီလိုနဲ့ ဥာဏ်နုံတဲ့လူငယ်ဟာ သူတတ်တဲ့ပညာနဲ့ အိုးဖုတ်ပြီး အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုလာလိုက်တာ ဆရာကြီးဆီကို တစ်နှစ်တစ်ခါ လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေပို့ပေးနိုင်တယ်တဲ့။ ဒါပေမယ့် ဥာဏ်ထက်တဲ့ လူငယ်ကတော့ တတ်ထားတဲ့ ပညာတွေ တစ်မျိုးပြီး တစ်မျိုးသုံးပြီး အလုပ်တွေ တစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောင်းလာလိုက်တာ လုပ်ငန်းတွေ မအောင်မြင်ပဲဖြစ်နေတယ်။ အဲဒီအခါမှာ အဲဒီလူငယ်စဉ်းစားမိတာက ဆရာကြီးက ဟိုတစ်ယောက်ကိုတော့ ပညာကုန်သင်ပေးလိုက်ပြီး ငါ့ကျတော့ ပညာချန်ထားတယ်ဆိုပြီး ဆရာကြီးဆီပြန်သွားတယ်။
ဆရာကြီးဆီရောက်တော့ အကျိုးအကြောင်းပြောပြတဲ့အခါ ဆရာကြီးက `အေး-ဟုတ်တယ်၊ ငါမင်းကိုပညာတစ်ခုသင်ပေးဖို့ လိုသွားတယ်၊ ငါ့နောက်လိုက်ခဲ့´ ဆိုပြီး သစ်ပင်တစ်ပင်ပေါ်တက်သွားတော့ တပည့်လည်း နောက်က လိုက်တက်သွားတာပေါ့။ သစ်ပင်ထိပ်ဖျားကိုရောက်ခါနီးတော့ ဆရာကြီးက အောက်ကတပည့်ကို သစ်ပင်ပေါ်က ကန်ချလိုက်တယ်။ အဲဒီအခါမှာ တပည့်လည်း လန့်ဖြန့်ပြီး မှီရာသစ်ကိုင်းကို လှမ်းဆွဲရတာပေါ့။ သစ်ပင်ပေါ်မှာ တန်းလန်းကြီးဖြစ်နေတဲ့ တပည့်က `ဆရာကြီးခင်ဗျား၊ ကျွန်တော်က ပညာကုန်သင်ပေးဖို့ပြောယုံနဲ့ ဘာ့ကြောင့် ကျွန်တော့်ကို သေကြောင်းကြံရတာပါလဲ ခင်ဗျာ´လို့ မေးတယ်။ အဲဒီအခါကျ ဆရာကြီးက `ဒီသစ်ပင်မှာ ကိုင်းပေါင်းဘယ်လောက်ရှိလဲ၊ ဘယ်ကိုင်းက အကြီးဆုံးလဲ၊ အခုသစ်ကိုင်းကို မင်းဘာ့ကြောင့်ဆွဲလဲ´ လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ တပည့်က `ဆရာကြီးခင်ဗျာ အသက်လုပြီးဆွဲရတာ တခြားကိစ္စတွေကို မစဉ်းစားနိုင်ပါဘူး´လို့ ပြန်ဖြေတယ်။ အဲဒီအခါကျ ဆရာကြီးက `အဲဒါ ငါပေးတဲ့ ပညာကုန်ပဲ။ ကိုယ်တတ်တဲ့ပညာနဲ့ အလုပ်တစ်ခုကို မိမိရရ ဖမ်းဆုပ်ပြီး စွဲစွဲမြဲမြဲမလုပ်ပဲ ဟိုဟာကောင်းနိုးနိုး၊ ဒီဟာကောင်းနိုးနိုးလုပ်နေလို့ ဘယ်ဟာမှ မအောင်မြင်တာပဲ´တဲ့လေ။
ခုခေတ်မှာလည်း ကျောင်းပြီးသွားပြီး သင်တန်းတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုတက်ရင်းနဲ့ ဘာမှ မလုပ်ဖြစ်ဘဲ ဘ၀မှာ အောင်မြင်မှုတွေ နောက်ကျမသွားရအောင် ကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေမယ့် အလုပ်တစ်ခုကို မလုပ်ခင်မှာ သေသေချာချာ စဉ်းစား၊ လက်တွေ့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါ ရိုးသားကြိုးစားခြင်းဖြင့် အောင်မြင်မှုတွေကို ရရှိနိုင်ကြပါစေ။
အရမ်းကောင်းတဲ့ အတွေးကိုပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ ပိုစ့်ပါပဲ… မှန်ပါတယ်ဗျာ… တစ်ခုကို ဆုံးဖြတ်ပြီး စွဲစွဲမြဲမြဲ လုပ်တာဟာ အကောင်းဆုံးပါပဲ…
အလုပ် မှာ ပေါ်ပင် တွေ လိုက်လုပ်ရင် မတည်မြဲဘူး ဆိုတာ သက်သေပါဘဲ
ဒီပို့စ်က ယေဘူယျအားဖြင့် မှန်ကန်ပေမယ့် ယနေ့ခေတ် မြန်မာပြည် စီးပွားရေးလောကအတွက်တော့ အပြည့်အ၀ မမှန်ကန်တော့ဘူး …
ဟုတ်တာပေါ့. ဒီမှာ ပို့စ်တင်ဖို့ စာရေးရင်းနဲ့ ချက်တင်လုပ်လိုက် လိုင်းကျသွားတော့ ဂိမ်းဆော့လိုက်နဲ့ တော်တော်နဲ့ကို မပြီးနိုင်သေးဘူး ။ ကျေးဇူးပါ မမရယ်။ ကျွန်တော်ကို သတိပေးလိုက်သလိုပါပဲ။
ရပ်ကွက်ထဲမှာ ကောင်မလေး တစ်ယောက်ရှိတယ် .. ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ အလုပ် စလုပ်ခဲ့တယ် .. တော်တော် အောင်မြင်တဲ့ နေရာရောက်နေပြီ .. လစဉ် ဆုကြေးပါ ပေါင်းရင် တစ်သိန်း ကျော်ကျော်ရနေပြီ .. ဟော အထက်က လူက သူ့ကို နှိပ်ကွပ်တယ်လို့ ယူဆတယ် တဲ့ .. ဒါနဲ့ အလုပ်ထွက်တယ် .. နောက် အလုပ်တစ်ခု ပြောင်းတယ် .. အရင် အလုပ်ထက် ပင်ပန်းတယ် .. ရတာလဲ နည်းတယ် ဆိုပြီး ထွက်ပြန်တယ် .. ဒါနဲ့ အခု အလုပ် တစ်ခုက တစ်ခု ပြောင်းနေတာ ခြောက်ခါလောက် ရှိနေပြီ ..
ကိုယ်ပိုင်မှ မလုပ်နိုင်သေးတာကို မာန တစ်ခွဲသားနဲ့ အဆူမခံနိုင်တော့ အခု အလုပ်က လေးသောင်းတန်ပဲ ရနိုင်တော့တယ် ..
သူ့ အရင် ပထမ ကုမ္ပဏီမှာ လုပ်တဲ့ ကလေးမ တစ်ယောက်ကတော့ အခုဆို တော်တော် အဆင့်မြင့်နေပြီ ..
ကောင်းမယ်ထင်တာတွေ လိုက်လုပ်နေရင် .. ပိုရမယ်ထင်တဲ့ နေရာ လိုက်နေရင်းနဲ့ မူရင်း နေရာလောက် မကောင်းတဲ့ နေရာကို ရောက်သွားတာ ..
ဟုတ်တယ်။ အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာ မျောက်လို ကျင့်ရတယ်တဲ့။ နောက်သစ်ကိုင်းကို ကူးဖို့ စိတ်ချလက်ချ မကိုင်မိသေးပဲနဲ့ အရင်သစ်ကိုင်းကို လက်မလွှတ်ရဘူးတဲ့။ အလုပ်တွေ ပြောင်းပြောင်းလုပ်နေတာက ရည်းစားတွေပြောင်းပြောင်းနေတာနဲ့ စာရင်နဲနဲတော့ တော်ပါသေးတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်……….. အလုပ်တစ်ခုကို စွဲစွဲမြဲမြဲလုပ်တာအကောင်းဆုံးပါပဲ။
တစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောင်းနေရင် မကောင်းပါဘူး။ ဘယ်အလုပ်မှာမဆို ကိုယ့်ကိုလိုတဲ့သူရှိသလို
မလိုတဲ့သူလည်းရှိနိုင်တာပဲလေ။ ဒီတော့ ဘာတွေပဲဖြစ်နေဖြစ်နေ ကိုယ့်တာဝန်ကိုယ်ကျေပွန်အောင်လုပ်ပြီး
ရှိနေတဲ့အလုပ်ကို စွဲစွဲမြဲမြဲလုပ်ဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
အလုပ်ခုန်တဲ့လူတွေက ဘယ်တော့မှာ အကြီးကဲမဖြစ်ဘူးတဲ့…။
ဒီနိုင်ငံမှာ အရည်ချင်းတွေ အပြည့်နဲ့လာတဲ့လူကို နေရာကြီးကြီးပေးတဲ့ အလုပ်က ရှားပါတယ် ။ အရည်ချင်းတွေရှိနေတာတောင်မှ အချိန်နည်းနည်း ပေးပြီး ၀င်လုပ်ပါမှ လူကြီးနေရာ ရတတ်တာပါ ။
ကျုပ်ထင်သလောက်တော့ ..အဲဒီသဘောတရားက .. ဒီသာပါမောက္ခခောတ်မှာပဲ ..ကျန်ခဲ့တယ်…။
ဒီခေတ်ကတော့ .. တတ်နိုင်သလောက် ရနိုင်သလောက် .. ပညာတွေကိုရအောင်ယူ..။
ကောင်းမယ်ထင်တဲ့အလုပ်ပြောင်းပြောင်းသွားတာ ..အကောင်းဆုံးပဲ..။ မကြိုက်တဲ့အလုပ်မှာတော့ … စိတ်ဓါတ်အင်အားတွေ အနာခံပြီး စွဲမြဲမနေကြစေချင်ပါဘူး..။ လူ့ဘ၀ဟာတိုပါတယ်..။ ဒီထဲ..ငွေရှာနိုင်တဲ့အချိန်ဆိုတာ ..တကယ့်တိုတိုလေးပါ..။
ကျောက်ချ ရပ်ရမဲ့နေရာက .. ကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်ပြီး ကုမ္ပဏီထောင်တဲ့အခါပဲဖြစ်ရမှာ..။
ဒါတောင် .. ဒီခေတ်.. ကုမ္ပဏီတွေပြုတ်လွန်းလို့ … ကုမ္မဏီတောင် ..တခုပြီးတခု ပြောင်းထောင်ရင်း … ရှင်သန်နေကြတာပဲလေ..။
ကိုယ်ပိုင် အရင်းအနှီး ရှိမှ ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်း လုပ်နိုင်တဲ့ နိုင်ငံမှာတော့ အလုပ်တခုကို မြဲအောင် ကိုင်ထားပြီး ငွေစုပြီး လုပ်ငန်း လုပ်တာ အကောင်းဆုံဘဲ။
ဘယ်ဘဏ်ကမှ ချေးငွေ မထုတ်ပေးပါဘူး။
အရှိကို အရှိအတိုင်း မြင်နိင်ကြပါစေ။
စီးပွါးရေးသီအိုရီအသစ်အရဆိုရင်တော့ မျောက်သစ်ကိုင်းလွတ် ပုံပြင်က ပြောင်းလဲသွားပါပြီ။ တခုဘဲရှိတာက
အခြေအနေ အရပ်ရပ်ကိုလေ့လာပြီး ပြောင်းသင့်ပြောင်းပါ။ သေနေမဲ့နေရာမှာအောင်းနေရင်လဲ ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်သလို ..။ တစ်နေရာထဲမှာ စွဲနေရင်လဲ တိုးတက်လာရင်ကိုယ်က လူယုံဖြစ်ပြီး နေရာကောင်း
ရပါလိမ့်မယ်။အမှတ်ရတာလေးတခု .. ပြောပြပါ့မယ် ။ ယနေ့ဒဂုံစင်တာပိုင်ရှင် ဦးဝင်းအောင် မအောင်မြင်ခင်က
သူ့ရုံးခန်းဟာ ဆူးလေ မီးသတ်နားမှာ ကျဉ်းကျဉ်းနဲ့ သာမန် အခန်းလေးပါ။ အဲဒီတုန်းက သူက ကားပါမစ်တွေဝယ်ပြီး
ကား အင်ပို့စ် လုပ်ပြီးရောင်းပါတယ်။ တခါတော့ ကျနော်ရောင်းလိုက်တဲ့ကားပါမစ်တခုကို မာစီးဒီး သွင်းဖို့ဝယ်လိုက်ပါတယ်။ ၀ယ်ပြီး ၆ လကြာတော့လည်းမသွင်းဖြစ်ပါဘူး ဈေးကွက်က ကျလာတာကိုး ..။ တနှစ်သာပြည့်ရော မသွင်းဖြစ်တော့ ကျနော်ဒုက္ခရောက်ပါတယ် ပထမပါမစ်မသွင်းမချင်း ဒုတိယပါမစ် သွင်းလို့မရဘူးလေ။ အဲဒီအချိန်မှာ သူ့ရုံးခန်းမှာတောက်တိုမယ်ရ ကုန်သွယ်ရေးရုံးပြေးလိုက် ဘဏ်ပြေးလိုက် လုပ်နေရတဲ့ သူတယောက်ရှိပါတယ်။ တိုတိုပြောကြပါစို့ ။ ဦးဝင်းအောင်ဟာ ကား Import အဆင်မပြေတော့
သစ်ဖက်ပြောင်းလုပ်ပါတယ်။ ကုမ္ပဏီက အောင်မြင်မလာပါဘူး။ အဲဒီကောင်လေးကတော့သူ့ဆီမှာရှိတုန်းပါဘဲ။
အဲ … အခု အများသိကြတဲ့အတိုင်း နိုင်ငံတော် ဦးဝင်းအောင်လဲဖြစ်လာရော အဲဒီတောက်တိုမယ်ရလေးက
Director ရာထူးဖြစ်နေပါပြီ။ ကျနော်တခါတခါသွားရင်တောင်တွေ့ဖို့ အတော်လေးစောင့်ရသဗျ။ ဒါပေမဲ့အဲဒီကောင်လေး၇ဲ့ ရိုးသားမှုကလဲ ပြောင်းလဲမသွားပါဘူး။ နေရာမြဲတဲ့ အကျိုးပေါ့လေ။ ဒါကြောင့် တရားသေ
အယူအဆတခုကို ဆုတ်ကိုင်မထားဘဲ ကိုယ်ပိုင်ဥာဏ်လေးနဲ့ ဆုံးဖြတ်ကြပေါ့လို့ ….။
ဦးဖက်ကို ထောက်ခံပါတယ်။ ကျမပြောချင်တာလည်း အဲဒီ အဓိပ္ပါယ်ပါဘဲ။ ဘယ်လောက်ပဲ တော်တော် စ၀င်တာနဲ့ CEO တန်းမဖြစ်ပါဘူး။
ဒါပေ့ါ မမရယ် တခြားနိုင်ငံတွေမှာတော့ အလုပ်ပြောင်းတာ ဘယ်လို နေလဲ မသိပေမဲ့ ဒီနိုင်ငံမှာတော့ သိတဲ့ အတိုင်းပဲလေ…။ ၀င်တာနဲ့ ချက်ချင်း CEO ဖြစ်ဖို့မလွယ်ပါဘူး … အဲ့.. ခြွင်းချက်တော့ ရှိတယ်… ပတ်သတ်ရာပတ်သတ်ကြောင်း နဲ့ ၀င်ရင်တော့ ရာထူးမြင့်နေရာတွေ (အရည်ချင်းမရှိလည်းပဲ ) ရနိုင်ပါတယ် ။
ဟုတ်ပါတယ် အီးတုံးကိုထောက်ခံပါတယ်…… (ပတ်သတ်ရာပတ်သတ်ကြောင်း နဲ့ ၀င်ရင်တော့ ရာထူးမြင့်နေရာတွေ (အရည်ချင်းမရှိလည်းပဲ ) ရနိုင်ပါတယ် ။) အစိုးရရုံးမှမဟုတ်ပါ…. အပြင်ကုမ္ပဏီတွေမှာကိုရှိနေတာ လက်တွေ့ပါ…….
ဟုတ်ပါ့ … ကိုယ်တွေ့ကိုယ်တွေ့ ဟွန်း … ပြောရရင် ဒေါကီးတယ် …
တခါ အလုပ်တခုမှာ သူငယ်ချင်း တယောက်က သူဌေးနဲ့ သိလို့ အလုပ်သွင်းပေးထားတာ ဒါရိုက်တာ တယောက်က မသိဘဲ အလုပ်ဖြုတ်ပစ်လိုက်လို့.. အဲဒီ ပြသနာ တော်တော် ရှင်းရသေးတယ်။ သူငယ်ချင်းကလည်း ခေသူမဟုတ်ဘူးလေ.. သူ ဖေဖေက လက်မှတ်ထိုးပေးထားတာတွေ အကုန် ရုတ်သိမ်းသွားလို့ ဆိုလား.. အကျပ်ရိုက်လို့ တောင်းပန်ပြီး ပြန်ခန့်လိုက်ရတယ်။
ဒေါက်တာအောင်ထွန်းသက်ကတော့ အလုပ်ပြောင်းလုပ်ဖို့ မကြောက်ကြပါနဲ့လို့ သူ့ဘ၀နဲ့ယှဉ်ပြီးပြောဖူးပါတယ်၊သူလို ပင်ကိုယ် အရည်အချင်း သိပ်မြင့်တဲ့သူ အတွက်တော့ မှန်ပါလိမ့်မယ်၊ သာမန်လူတွေအတွက် ရှိရင်းအလုပ်က အဆင်ပြေရက်နဲ့တော့ နောက် အလုပ်သစ်မပြောင်းသင့်ဘူးလို့ မြင်ပါတယ်၊အလုပ်ရှင်ဖက်က ကြည့်ရင် ကိုယ့်ဆီမှာပဲ စွဲစွဲမြဲမြဲလုပ်တဲ့ ၀န်ထမ်းအပေါ် သံယောဇဉ်ရှိကြတာပါပဲ၊ သာရေးနာရေးက အစစောင့်ရှောက်ကြတာ မြန်မာပြည်က ထုံးစံပါ။ မိုးလေ၀သဦးထွန်းလွင်ရဲ့ ဘ၀အကြောင်းဖတ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်၊